China Fireproof Aluminium Composite Panel mpanamboatra sy mpamatsy | Chenyu
Ny tontonana firafitra aluminium fireproof dia karazana fitaovam-pandrefesana haingon-trano vaovao, izay manana tombony tsy manam-paharoa maro raha oharina amin'ny fitaovana mitafy hafa. Ny anton'izany dia ny takelaka vita amin'ny aliminioma dia misy akora roa (vy sy tsy metaly) misy toetra samy hafa tanteraka. Tsy mitazona ny toetra mampiavaka ny akora fototra (ny alimo vy, ny plastika polyethylene tsy metaly), fa koa ny mandresy ny lesoka an'ireo akora fototra.
2. Ny tanjaka peel ambony sy ny toetra mekanika tsara, mahafeno ny fepetra iraisam-pirenena amin'ny takelaka vita amin'ny plastika alimina plastika GB / t17748;
3. Ny fizotran'ny fotodrafitrasa dia manana fahaiza-mampifanaraka matanjaka, saika tsy manova ny fepetra fanodinana extrusion an'ny takelaka plastika tsotra-plastika, izay afaka mahafeno ny fepetra takian'ny làlan'ny teknikan'ny fanodinana plastika aluminium-plastika ao an-trano sy any ivelany;
5. Ny retardant mirehitra ao anaty akora fototra dia manana fahamarinan-toerana tsara, tsy misy fifindra-monina sy orana ary mahatohitra ny toetr'andro, izay maharesy ny lesoka amin'ny hazon-damosina halogène tsotra izay tsy mahazaka hazavana ultraviolet, noho izany dia mety tsara amin'ny anatiny sy ivelany ravaky ny mari-trano;
7. Ny fotokevitra fototra dia ny retardant mirehitra tontolo iainana sy fitaovana madio, tsy misy halogen ary setroka ambany. Tena sarotra ny may. Ny habetsahan'ny setroka dia tena kely rehefa may, ary tsy misy gazy manimba sy setroka mainty. Tsy misy fandotoana ary mahafeno ny fepetra takian'ny fanjakana amin'ny fitaovana fananganana maintso sy fiarovana ny tontolo iainana.
Izy io dia mety amin'ny rindrina ambainy sy ny ravaka anatiny sy ivelany miaraka amin'ny fepetra fiarovana avo lenta.
Ny tontonana vita amin'ny aliminioma mirehitra dia manana vidiny lafo sy fampiharana lehibe. Azo ampiasaina amin'ny fanaingoana ny rindrina ambainy, rindrina anatiny sy ivelany, tranom-bahiny, trano fisakafoanana, toeram-pivarotana, efitrano fihaonambe sns. Azo ampiasaina amin'ny fanaingoana ireo trano taloha, hopitaly, gara ambanin'ny tany, toerana ambanin'ny tany sns.
Satria ny takelaka vita amin'ny aliminioma dia misy akora roa (metaly sy tsy metaly) samy hafa tanteraka ny fananany, dia tsy ny fitazonana ny toetra mampiavaka ny akora fototra ihany (ny alimo vy, ny plastika polyhexene tsy metaly), fa koa maharesy ny tena izy singa tsy ampy Ampy, ary nahazo fananana be dia be.
1) Mampiasa akora simika sy teknolojia avo lenta ny coempany hitsaboana simika ny tampon'ny coil aluminium, mamorona sarimihetsika tantely tantely tantely ambonin'ilay coil aluminium, ka ny loko sy ny coil aluminium dia mitambatra mafy amin'izany. mpanelanelana, ary manana adhesion tsara. .
2) Ny firakotra ataon'ny orinasa dia mandray masinina mihodina telo-roller mihodina iraisam-pirenena, izay manao coating tsara ao anaty fanjakana mihidy sy tsy misy vovoka, mba hifehezana tsara ny hatevin'ny sarimihetsika manarona sy ny kalitaon'ny fisehoana eo amin'ny rindrina; ny lafaoro dia mizara ho faritra efatra hifehezana ny hafanana sy hanendasana.
3) Ny tsipika fitambarana fatorana mafana mitohy dia ireo fitaovana ilaina amin'ny famoronana tontonana plastika aluminium-plastika. Ny asany dia ny fanaovana ny fitaovana aluminium, ny fotony PE ary ny sary mihetsika polymer mifamatotra mafy eo ambanin'ny asan'ny hafanana avo be sy ny tsindry mba hamoronana faritra fisaka.
Teo aloha: Panel vita amin'ny alimina vita amin'ny alimina
Manaraka: Art miatrika tontonana fitambarana aliminioma